သီဟသူ သည် ပုဂံခေတ်တွင် ၁၂၅၁ ခုနှစ်မှ ၁၂၅၆ ခုနှစ်အထိ အိမ်ရှေ့မင်းသား အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ဥဇနာမင်း၏ သားတော် နှစ်ပါးအနက် အကြီးဆုံး သားတော် ဖြစ်သည်။ အမတ်ကြီးရာဇသင်္ကြံအား မိမိကြွလာသည်ကို မြင်လျက်နှင့် အင်္ကျီလက်ကို မသိမ်းရာသလောဟု အင်္ကျီလက်ပေ ...
အပယ်ရတနာ သည် ပုဂံခေတ် ကျန်စစ်သားမင်း၏ မိဖုရားခေါင်တစ်ပါး ဖြစ်ပြီး အလောင်းစည်သူမင်း၏ အဘွားတော်စပ်သူ ဖြစ်သည်။ အပယ်ရတနာသည် ကျန်စစ်သား မင်းမဖြစ်မီ အချိန်ကတည်းက လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အပယ်ရတနာပြီးနောက် ဆက်ခံသည့် မိဖုရားခေါင်မှာ သမ္ဘူလ ဖြစ်သည်။
Harvey၊ G. E. 1925။ History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 ။ London: Frank Cass & Co. Ltd။ မြတ်စိုး, ed. ၁၉၆၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်။ ၉ ၁ ed.။ ရန်ကုန်မြို့: စာပေဗိမာန်။ CS1 maint: unrecognized language link စ ...
ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် သည် ရွှေတောင်မြို့၊ ကျီးသဲရွာ ရှမ်းတန်းကလေး၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၇၉-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆုတ်ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖွားမြင်လေသည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်ကင်း ဟုခေါ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ မြောက်ပိုင်း ဝါးဘလောက်သောက် ရွာ၌ ခမည်းတော် ကျောင်းဆရာ ပွဲစားကြီး ဦးထွန်းအေး၊ မယ်တော် ဒေါ်နှစ် တို့က ၁၉၁၉ ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ခြောက်ဦးတွင် အထွေးဆုံး သား ဖြစ်၍ အမည် မောင်ကြီ ...
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထင်ရှားသော ကျမ်းပြုစာဆိုတစ်ဦးကား ကြည့်ကန်ရှင်ကြီး ဖြစ်၏။ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ လင်္ကတောဆယ်ရွာ အဝင်အပါ ကြည့်ကန်ရွာတွင် သက္ကရာဇ် ၁၁၁၉-ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်၏။ စနေသားဖြစ်သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်နုဖြစ်၍ ရှင်ဘွဲ့နန္ဒဓဇ ဖြစ်သော်လည် ...
မဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သည် မဟာဗောဓိတထောင်သာသနာ့နယ်မြေကြီးကို စတင်တည်ထောင်တော်မူသော သာသနာ့အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ မဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်သည် ဘာဝနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းမှ ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အထူးစီးဖြန်းတော်မူခဲ့သည့် မထေရ်မြတ ...
မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ဆရာတော် သည် ရွှေဘိုမြို့ တောင်လက်စမွန်ရွာ၍ သူဌေး ဦးမီု၊ ဒေါ်မိတို့မှ သက္ကရာဇ် ၁၂ဝဝ ပြည့်နှစ် ဝါဆိုလဆန်း ၁၃ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွားမြင်တော်မူသည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်မောက်ဖြစ်သည်။ ၈ နှစ်သား အရွယ်တွင် စမွန်ရွာ မဟာရုံတိုက် အရှင်နန္ဒမထေရ် ...
ရှင်သဒ္ဓမ္မဇောတဘွဲ့ခံ ဝံတောင်လည်ဘုန်းတော်ကြီးသည် ပြည်မြို့ ဇာတိဖြစ်၏။ ရတုအဖွဲ့အနွဲ့ အလွန်ကောင်းသဖြင့် အင်းဝခေတ် စာပေ လောကတွင် ထင်ရှားလေသည်။ အင်းဝခေတ်တွင် ကျော်ဇောထင်ရှားသော ရဟန်းစာဆိုတော် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ပြည်မြို့သို့ရောက်၍ သီတင်းသုံးတော် မူစဉ် ဝံ ...
စာပေအမြောက်အမြား မရေးခဲ့သော်လည်း ရေးသမျှနှင့်ပင် ပထမတန်းစားရတုဆရာဟု စာရင်းဝင်ဂုဏ်ပြုအပ်သော တောင်ငူခေတ်စာဆိုတော် ရှင်သံခိုသည် လှော်ကား ၃ဝဝဝမှူး၏ မြေးဖြစ်၍ မင်းဇေယျရန္တမိတ်၏တူတော်ပြီးလျှင် ရတုဘုရင် နတ်သျှင်နောင်ထံ၌ ခစားသောအမတ်လည်း ဖြစ်၏။ သက္ကရာဇ် ၉ ...
မင်းဘူး ဦးဩဘာသသည် ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှ ၈-ဘွဲ့ကို စကားပြေဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး ကျန်နှစ်စောင်ကို မပြုစုနိုင်ပဲ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သော ဆရာတော်ဖြစ်သည်။ ဦးဩဘာသသည် မင်းဘူးမြို့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ဖွားသက္ကရာဇ်ကို သေချာမသိရပေ။ သက္ကရာဇ် ၁၀၁၄-၁၁၂၄ အတွင်း ဖွားမြင်သည် ...
စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ နေထွတ်၏ အမည်ရင်းမှာ ကျော်မင်းထွန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ စနေနေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်မြို့နယ် လက်ပန်တောရွာ တွင်မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း ၈ ယောက်အနက် စတုတ္ထမြောက်ဖြစ်ပြီး လက်ပန်တောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကံသာအစိုးရ ...
ပဒတ္ထမဉ္ဖူသာ ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်ကြီး နှင့် အများသုံး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန် ပြုစုခဲ့သော သုတေသန ပညာရှင် အဘိဓာန် ဆရာကြီး ဦးဟုတ်စိန် သည် ပုသိမ်မြို့ ဇာတိဖြစ် သည်။ ၁၂၅၁ ခု၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁ရက်၊ အင်္ဂါ နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မိဘများမှာ ကုန်သည ...
အင်းဝခေတ်သည် မြန်မာစာပေလောကတွင် ပျို့နှင့် မော်ကွန်းအရေးအသား၌ တိုးတက်သော ခေတ်ဖြစ်၏။ ထိုခေတ်က ထွန်းကားခဲ့သော စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း အများအားဖြင့် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုများ ထင်ရှားနေသောခေတ်တွင် ကိုယ်ရည်သွေးရတု ...
ခင်ဆုံ သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထင်ရှားသော မြန်မာအမျိုးသမီး စာဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် မြေထဲဝန်၏သမီး ဖြစ်သည်။ ဘကြီးတော်မင်း လက်ထက်တွင် ကဗျာလင်္ကာများကို ဖွဲ့ဆိုသဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ခင်ဆုံသည် မြဝတီမင်းကြီးနှင့် ခေတ်ပြိုင်စာဆိုတော်တစ်ဦ ...
မမိကို သက္ကရာဇ် ၁၂၂၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၉ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သုံးဆယ်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးလူငယ်နှင့် ဒေါ်ရွှေမယ်တို့ ဖြစ်သည်။ စာပေများကို လေ့လာသင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဝန်ထောင်မောင်ငွေခိုင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
မမြကလေးကို ၁၁၇၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၂ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ပါးမျာ ပုသိမ်နယ် သာရဝေါ-ပဲ့နင်းမင်းပျံချီဘွဲ့ခံ သမိန်ထောရာဇာနှင့် မယ်အိ ဖြစ်သည်။ မမြကလေး၏ ငယ်မည်မှာ" မမြကြုတ်” ဖြစ်သည်။ သာယာဝတီမင်းသည် မြို့စားအဖြစ်ဖြင့ ...
မယ်ခွေ သည် ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၃ ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် ထင်ရှားကျော်စောသော အမျိုးသမီးစာဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်တချို့၏ မှတ်သားချက်အရ မယ်ခွေသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော သာယာဝတီ ...
မိဖြူ၊ မိညို တို့သည် တကယ် အမျိုးသမီး စာဆိုများ မဟုတ်ဘဲ၊ စာဆို ပညာရှင် တစ်ဦးက မိဖြူဟန်၊ မိညိုဟန် ပြု၍ ကိုယ်ရည်သွေး ရတု နှစ်ပုဒ်ကို ကဗျာဉာဏ် ကွန့်မြူးကာ ရေးဖွဲ့လေသလောဟု တွေးတော ထင်မြင်မိပါသည်။ ကြံကြံဖန်ဖန် စဉ်းစားသည်။ အင်းဝတွင် နောက်ဆုံးစိုးစံခဲ့သေ ...
ပယ်သူငယ်စား ရှင်မြတ်ခေါင် သည် သက္ကရာဇ် ၉၁၂ ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူများရှင် မင်းတရားကြီး လက်ထက်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော စာဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြည်-နဝဒေးကြီးနှင့် ခေတ်ပြိုင်စာဆိုတော် ဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ် ၉၃၆ ခုနှစ်တွင် သခင်ကြီးဧချ ...
ရဝေ ရှင်ထွေးသည် ကေတုမတီ တောင်ငူရွှေနန်းတည် မဟာဓမ္မရာဇာမင်း ၏ နန်းတွင်း ကိုယ်လုပ်တော်ဖြစ်သည်။ တောင်ငူမြို့ကို အနောက်ဘက်လွန် မင်းတရားကြီး အလိုတော်ပြည့်လျှင် ရဝေရှင်ထွေးကို အင်းဝသို့ ခေါ်ဆောင်သွား၍ အင်းဝတွင် နန်းတွင်းစာဆိုအဖြစ် ခစားရ သည်။ ရဝေရှင်ထွေ ...
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အလွန်လှပသည် ဟုထင်ရှားသည့် ပင်တိုင်စံမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ဟံသာ၀တီဆင်ဖြူများရှင် ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီးနှင့် ရာဇဒေဝီဘွဲ့ခံ ရှင်ထွေးလှ တို့မှ ၉၂၁ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၄ ရက်၊တနင်္ဂနွေ နေ့ တွင်ဖွားမြင်သည်။ ထိုနေ့သည် မဟာစေတီ၏ ဌာပန ...
လှိုင်မင်းသမီးသည် ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ ပတ်ပျိုး၊ သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခံ၊ ယိုးဒယား၊ ဘောလယ်၊ တေးထပ်တို့ကို စီကုံးရေးသားရာ၌ ထီး သုံးနန်းသုံး အနှုန်းအဖွဲ့ ယဉ်ကျေးလှသောကြောင့် မယ်တော်ဘုရားကဲ့သို့ပင် စာဆိုလောကတွင် ကျော်စောထင်ရှားလေသည်။ အထူးသဖြင့် ဘောလယ်နှင့် ...
အနောက်နန်းမတော် မမြလေးကို သက္ကရာဇ် ၁၁၇၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်၏မယ်တော်ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားဖြစ်သော သာယာဝတီမင်းကုန်းဘောင်မင်း)က သူ၏နောင်တော် ဘကြီးတော်ထံကနေ ထီးနန်းသိမ်းပိုက်ယူလိုက်သော သက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ ခုနှစ်မှာ တေးကဗျာလင်္ကာ ...
ကင်းထောက် ဒေါ်ကြည်ကြည် သည် ပါလီမန်ခေတ်တွင် ကင်းထောက် အမျိုးသမီး တဦး အဖြစ် သာမက လူထုပညာရေးမှူး အဖြစ်ပါ ထင်ရှားသည်။ ဒေါ်ကြည်ကြည်ကို စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရွာသစ်ကြီး၌ ကျောင်းဆရာကြီး ဦးငွေစံ၊ ဒေါ်နှစ်တို့က ဖွားမြင်ပြီး၊ မိခင်သည် သီပေါမင်းလက်ထက် ရွှေတိုက်အတ ...
ယုဝတီကြည်ဝေကို ပဲခူးခရိုင်၊ ပိန်းဇလုတ်မြို့နယ် ကင်မွန်းခြုံရွာနေ အဖ ဦးကြာခိုင်နှင့် အမိ ဒေါ်အုံးယဉ်တို့က ၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စည်က မကြည်ဝေ ဟု ဖခင်ဖြစ်သူက ပညတ်ခဲ့သော်လည်း မိခင်ကြီးကမူ ချစ်စနိုးဖြင့် အလတ်မ ဟု ခေ ...
၁၉၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းရပ်၌ မွေးဖွားသည်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးဟန် နှင့် ဒေါ်ငွေယုန်တို့ဖြစ်၍ ကုန်သည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမည်ရင်းမှာ မကြည်ကြည်တင်မြင့်ခေါ် ဒေါ်သောင်းကြည် ဖြစ်သည်။ တတိယတန်းတွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ ...
အမည်အရင်း ဒေါ်လှကြည်၊ မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ တောင်စွန်း ဇာတိ ဖြစ်သည်။ အဖ ဗိန္ဒောဆရာကြီး ဦးသက်နှံနှင့် အမိ ဒေါ်ငွေယုန်တို့မှ ၁၂၈၇ ခုနှစ်၊ ဝါဆို လဆန်း ၅ရက်၊ တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ခြောက်ယောက်တွင် ငါးယောက်မြောက် ဖြစ်သည်။ အစ်ကိ ...
အဖ-ဦးကျော်ထွန်းနှင့် အမိ-ဒေါ်ငွေနှစ်တို့မှ ၁၉၁၈-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ မကြန်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် သံတွဲမြို့ အစိုးရဟိုက်စကူးကျောင်းမှ ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ်ခေါ် ဆယ်တန်းကို ကအဆင့်မှ အောင်မြင်ခ ...
၁၉၂၈ ခုနှစ် ၊ဇန်နဝါရီလ ရက်နေ့တွင် အဖ အငြိမ်းစားရဲမင်းကြီး ဦးခင်မောင်လတ် ၊ အမိဒေါ်ခင်စောလှတို့မှ မန္တလေးမြို့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ရွှေလှံဗိုလ်၏ မြစ်လည်း ဖြစ်သည် ။ အမည်ရင်းမှာဒေါ်ခင်ခင်စိန် ဖြစ်ပြီး မွေးချင်းငါးယောက်တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ မန်တလေးမ ...
ရေနံမြေ မခင်စု သည် စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဖ ဦးတင်၊ အမိ ဒေါ်ဇွန်းတို့မှ ၁၉၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၌ ရေနံချောင်းမြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ ရေနံချောင်းမြို့၊ မန္တလေးကျောင်းတိုက်၊ အမျိုးသားအထက်တန်း ကျောင်းတို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဆရာအတတ်သင်သိပ ...
၁၉၃၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အဖ ဦးဘတင့် နှင့် အမိ ဒေါ်ခင်စောမူ တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာလည်း ဒေါ်ခင်စောတင့် ပင်ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း နှစ်ဦးသာရှိပြီး မောင်ဖြစ်သူမှာ ဦးနေအုပ်တင့် ဖြစ်သည်။
စာရေးဆရာကြီး မဟာဆွေ နှင့် ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့၏ သမီး ဖြစ်ပြီး ၁၉၃၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၂ အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း တွင် သုံးတန်းအထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၉ အထိ စိန့်ဂျွန်းကွန်ဗင့်က ...
ဒေါ်ခင်နွဲ့ဟန်ကြည်ကို ဦးမြတ်သိန်း ၊ ဒေါ်နှင်းအုံတို့က ၁၉၄၁ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်မြောင်း တာမွေရပ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၌ မွေးဖွားသည်။ ဝိဇ္ဇာတွဲ ဥပစာတန်းကို ၁၉၅၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထီးတန်းကောလိပ်မှလည်းကောင်း၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ...
ဧရာဝတီတိုင်း ဝါးခယ်မမြို့၌ အဖ အစိုးရကျောင်းဆရာကြီး ဦးဘ ၊ အမိ ဒေါ်သိန်းတင်တို့မှ ၁၉၂၅ခု ၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် တနင်္လာနေ့ တွင်ဖွားမြင်သည် ။ မွေးချင်း ခုနစ်ယောက်အနက် ငါးယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်မောင်နှမ ဝမ်းကွဲတော်စပ် သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ ၁ ...
စာရေးဆရာမ ခင်မာသစ်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ရေကျော် မက်သဒစ်ကျောင်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင် သင်တန်း ဆယ်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့ U.B.A. တွင် အောက်တန်းစာရေး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့ I.W.T. တွ ...
အမည်ရင်း ဌေးဌေးမြင့်။ ဆင်ဖြူကျွန်းတွင် ဦးမြခင်၊ အမိ ဒေါ်လှသောင်းတို့မှ မွေးဖွားသည်။ ၁၉၇၄-၇၅ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၌ တနပ်စာ ဝတ္ထုတို၊ ၁၉၇၈ ဇွန်လထုတ် မိုးဝေ စာပေ မဂ္ဂဇင်း၌ အမေ ဆရာမ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခဲ့သည်။ ဝတ္ထုတို စာရေးဆရ ...
သန်လျင်မြို့ ၌ အဖ ဦးမြင့်၊ အမိ ဒေါ်သန်းရွှေ တို့က ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက် သောကြာနေ့တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ခုနစ်ယောက် အနက် တတိယမြောက် သမီး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်း ဒေါ်လှလှ ဖြစ်သော်လည်း ကလောင်အမည် "ခင်လတ်" သည်ပင် အမည်ရင်း ကဲ့သို့ တွင်သည်။ ဆရာ ...
ယုဝတီခင်ဦးကို ဆရာဝန်ကြီး ဦးလှမောင်နှင့် အမိဒေါ်ခင်ရီတို့က ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သားသမီး နှစ်ဦးအနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်၍ ငယ်နာမည်များမှာ စန္ဒီလှမောင်နှင့် ကစ်တီ ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ရီရီလှ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မ ...
ကလောင်အမည် ချိုးဖြူခင် အမည်ခံ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သိန်းကို ဦးမြသိန်း၊ ဒေါ်အေးကြည်တို့က ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်တွင် ညောင်ဦးမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်းမောင်နှမ ကိုးဦးအနက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ညောင်ဦးမြို့ အထက် တန်းကျောင်းမှ အထက် တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပ ...
စန်းစန်းဦးသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အဖ ဦးစန်း၊ အမိ ဒေါ်ထွေးအောင် တို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း ရ ယောက်အနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အမည်အရင်း စန်းစန်းဦး ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က အမှတ် ၃၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွ ...
သာယာဝတီမြို့ ၌ အဖ လယ်သမားကြီး ဦးမိုးသီး ၊ အမိ ဒေါ်ကျီးညိုတို့မှ ၁၉၂၈ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ကြာသပတေးနေ့ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းရှစ်ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သည်။ ငယ်မည်" အပု” ၊ အမည်ရင်း" စိန်စိန်” ဖြစ်သည် ။
အဖ ဦးဆန်း၊ အမိ ဒေါ်နှင်းဇင်တို့က မြိတ်မြို့၊ ထားဝယ်စုတွင် ၁၃ ရက် မတ်လ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ညီမနှစ်ဦး အနက် အငယ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၀၆ မှ ၁၉၁၃ ခုနှစ် အတွင်း မြိတ်မြို့ မူလတန်း ကျောင်းတွင် တက်ရောက် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၁၄ မှ ၁၉၁၇ အတွင်းတွင် မော်လမ ...
သာယာဝတီခရိုင် လက်ပံတန်းမြို့၌ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ရက်နေ့ အဖ ဦးဘီစီဘရူးဝါး၊ အမိ ဒေါ်ရှင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ အမည်ရင်း ဦးတင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် R.A စာမေးပွဲကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ ...
အမည်ရင်း ဒေါ်တင်တင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၂ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျိုတ်လတ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘများမှာ ကျိုတ်လတ်မြို့ သွားစိုက်ဆရာကြီး ဦးဘဝေ၊ ဒေါ်လှဒန်တို့ဖြစ်ပြီး မွေးချင်း မောင်နှမ ၆ ယောက်တွင် ဒုတိယ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် စာရေးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင် ...
ဒဂုန် ခင်ခင်လေးသည် မန္တလေးမြို့ ဇာတိဖြစ်၍ ၁၂၆၅ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၆ ရက် စနေနေ့တွင် ဖွားမြင်သူ ဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ ရဲအင်စပိတ်တော် ဦးမောင်မောင်ကျော် ခေါ် ဦးမြတ်ကျော် ဖြစ်၍၊ မိခင်မှာ ဒေါ်ခင်ခင်လတ် ဖြစ်သည်။ အဘိုးဖြစ်သူ ဝက်မစွတ် မြို့စားမင်းက မြေးဖြစ်သ ...
၁၉၂၄ ခုတွင် ဗြိတိသျှ စစ်ဗိုလ် ဆန် လီဗိုင် Son Levy နှင့် ဒေါ် ခင်ခင်မေ တို့မှ ၁၉၂၄ ခုတွင် မန္တလေး၌ မွေးသည်။ ငယ်မည်မှာ ခင်မကြီး ဖြစ်သည်။ ကွန်ဗင့်ကျောင်းတက်စဉ်က အက်ဂနက် Agnes ဟု တွင်သည်။ အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ရောက်သော် ဖခင်တိမ်းပါး၍ မိခင်၏ အမျိုးအဆွေများ ...